Teamviewer | January 2020
Ịtọ ntọala na-agbanwe agbanwe na TeamViewer
TeamViewer, maka ihe nchekwa, mgbe ọ bụla ntinyegharịa nke usoro ihe omume ahụ mepụtara paswọọdụ ọhụrụ maka ịnweta ohere. Ọ bụrụ naanị na ị ga-ejikwa kọmputa ahụ, nke a dị oké njọ. Ya mere, ndị mmepe chere echiche banyere nke a ma mejuputa ọrụ nke na-enye gị ohere ịmepụta ọzọ, paswọọdụ na-adịgide adịgide nke a ga-amara naanị gị.
TeamViewer bụ mmemme nwere ike inyere onye nwere nsogbu kọmputa aka mgbe onye ọrụ a dị na PC ya. Ị nwere ike ịnyefe faịlụ dị mkpa site n'otu kọmputa gaa na ọzọ. Ma nke ahụ abụghị nke niile, arụmọrụ nke ntanetịpụ a dị nnọọ nha.
TeamViewer adịghị mkpa ka a hazie ya kpọmkwem, mana ịtọ ntọala ụfọdụ ga-eme ka njikọ ahụ dịkwuo mfe. Ka anyị kwuo banyere usoro ihe omume na ihe ha pụtara. Ntọala Mmemme Ntọala niile nwere ike ịchọta na mmemme ahụ site na ịmeghe ihe "Di elu" na menu kachasị elu. Na "Nhọrọ" ngalaba a ga-enwe ihe niile na-amasị anyị.
Kedu ọdụ ụgbọ mmiri TeamViewer ji?
Iji jikọọ na kọmputa ndị ọzọ, TeamViewer anaghị achọ ntọala firewall ọzọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, usoro ihe omume ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na a na-ekpo ọkụ na netwọk. Ma n'ọnọdụ ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ, na gburugburu ụlọ ọrụ na iwu nchedo siri ike, enwere ike ịmepụta firewall ka a ghara igbochi njikọ niile ọpụpụ.
Mgbasa nsogbu TeamViewer Kaspersky Anti-Virus
Ekele TeamViewer, ị nwere ike jikọọ na kọmputa ọ bụla ma jikwaa ya. Ma mgbe ụfọdụ, enwere ike inwe nsogbu dị iche iche na njikọ ahụ, dịka ọmụmaatụ, onye òtù ọlụlụ gị ma ọ bụ ịnweta Kaspersky Anti-Virus, nke na-egbochi njikọ Ịntanetị maka TeamViewer. Taa, anyị ga-ekwu otu esi edozi ya.
Idozi "Nwepu Njikọ" na TeamViewer
Njehie na usoro TeamViewer abụghị ihe ọhụrụ, karịsịa na nsụgharị ọhụrụ ya. Ndị ọrụ malitere mkpesa na, dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị ekwe omume ịme njikọ. Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ uka. Ka anyi gbalịa ichota ndi isi. Ebumnuche 1: Usoro mmemme nke usoro ihe omume Ụfọdụ ndị ọrụ achọpụtala na njehie na enweghị njikọ na ihe nkesa ahụ na ihe ndị yiri ya nwere ike ime ma ọ bụrụ na arụnyere usoro ihe ochie.
Idozi nsogbu na enweghị ike ịmalite TeamViewer
TeamViewer bụ usoro bara uru ma rụọ ọrụ. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-eche eziokwu ahụ na ọ na-akwụsị ihe ijuanya mere. Kedu ihe ị ga-eme n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ na ihe mere nke a ji eme? Ka anyị tụlee ya. Na-edozi nsogbu ahụ na mmalite nke usoro ihe omume a.
Esi eweputa kọmputa kpamkpam TeamViewer
Mgbe ha wepụsịrị TeamViewer site na Windows, ntinye ndekọ ga-anọgide na kọmputa, yana faịlụ na nchekwa nke ga-emetụta ọrụ nke usoro ihe a mgbe emeghachisịrị. Ya mere, ọ dị mkpa iji iwepụ ngwa ahụ zuru ezu. Usoro nke iwepụ ka ịhọrọ Anyị ga-enyocha ụzọ abụọ nke iwepụ TeamViewer: akpaka - iji usoro free Revo Uninstaller - na akwụkwọ ntuziaka.
Iguzobe njehie "WaitforConnectFailed" na TeamViewer
TeamViewer bụ usoro kachasị mma na nke kachasị mma n'etiti ndị ejiri maka akara kọmputa. Mgbe anyị na ya na-arụ ọrụ, e nwere njehie, anyị ga-ekwurịta banyere otu n'ime ha. Ihe kachasị mkpa nke njehie na mkpochapu ya. Mgbe ọ na-amalite, ihe omume niile na-abanye na server TeamViewer na ichere maka ihe ị ga-eme ọzọ.
Egwuregwu na TeamViewer
TeamViewer na-enye gị ohere ijikwa kọmputa gị. Maka iji ulo eme ihe, ihe omume ahụ nweere onwe ya, ma maka azụmahịa, ọ ga-adị mkpa iji nweta ikikere ruru 24,900 rubles. Yabụ, ihe ọzọ nweere onwe ya na TeamViewer ga-echekwa oke ego. TightVNC Akụrụngwa a na-enye gị ohere ijikwa kọmputa gị.
Usoro nsogbu nsogbu usoro nsogbu na TeamViewer
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-arụ ọrụ na TeamViewer, nsogbu dị iche iche ma ọ bụ njehie nwere ike ime. Otu n'ime ihe ndị a bụ ọnọdụ mgbe, mgbe ị na-agbalị ịbanye na onye òtù ọlụlụ, ihe odide ahụ na-egosi: "Njehie na-ekwurịta okwu agabiga." Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya. Ka anyị tụlee ha. Anyị na-ewepu njehie Njehie ahụ na-adabere n'eziokwu ahụ na gị na onye òtù ọlụlụ gị na-eji usoro iwu dị iche iche.
Iguzobe "Onye Mmekọ Na - abụghị Onye Na - ejikọta na Nwepu" Error na TeamViewer
Mgbe ị na-arụ ọrụ na TeamViewer, njehie dị iche iche nwere ike ime. Otu n'ime ihe ndị a - "Onye ahụ na-ejikọtaghị ya na router." Ọ pụtaghị mgbe ụfọdụ, ma mgbe ụfọdụ ọ na-eme. Ka anyị hụ ihe ị ga-eme na nke a. Kpochapụ njehie E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya. Ọ bara uru ịtụle nke ọ bụla n'ime ha.
Idozi "Njehie: Rollback kpuchie" enweghị ike na TeamViewer
Njehie na TeamViewer abụghị naanị mgbe ị na-eji usoro ihe omume ahụ. Ọtụtụ mgbe ha na-eme n'oge echichi. Otu n'ime ihe ndị a: "Ejighị usoro Rollback kpuchie". Ka anyị leba anya iji kpochapụ ya. Dozie njehie Idozi ya dị nnọọ mfe: Download usoro omume CCleaner ma kpochapụ ndekọ ya.
Gbanwee ID na TeamViewer
Mgbe ị wụnye TeamViewer, a na-ekenye ihe omume ahụ ID pụrụ iche. Ọ dị mkpa ka mmadụ nwee ike ijikọ na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-eji nsụgharị free maka ebumnuche azụmahịa, ndị mmepe nwere ike ịchọta nke a ma jiri naanị oge 5 zuru ezu, mgbe ahụ, a ga-akwụsị njikọ ahụ.
Idozi njehie "TeamViewer - Ọ bụghị njikere. Lelee Njikọ"
TeamViewer bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka njikwa na kọmputa. Site na ya, ị nwere ike ịgbanwe faịlụ n'etiti kọmputa jisiri ike na nke akara. Ma, dịka usoro ọ bụla ọzọ, ọ bụghị zuru okè ma mgbe ụfọdụ njehie na-eme n'ihi ọrụ abụọ ma ndị mmepe 'mmejọ.
Ijikọ na kọmputa ọzọ site na TeamViewer
Ọ bụrụ na ị maara otu esi jikọọ na kọmputa ọzọ site na TeamViewer, ị nwere ike inyere ndị ọrụ ndị ọzọ aka idozi nsogbu na kọmputa ahụ, ọ bụghị naanị nke ahụ. Jikọọ na kọmputa ọzọ. Ugbu a ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ nyochaa otu esi eme nke a: Meghee usoro ihe omume ahụ. Mgbe ịmalitere ya, ịkwesịrị ịṅa ntị na ngalaba "Nye Management".
Esi tinye TeamViewer
Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme iji kwụsị igwe ọzọ, chebara TeamViewer ntị - otu n'ime ihe kacha mma na nke a. Ọzọ, anyị ga-akọwa otu esi etinye ya. Download TeamViewer site na saịtị Anyị na-akwado ịbudata usoro ihe omume ahụ site na saịtị ahụ. Ime nke a: Gakwuru ya. (1) Pịa "Download TeamViewer".
https://termotools.com ig.termotools.com © Teamviewer 2020